Final-ka Champions League oo dib loo ciyaari doono kaddib markii kooxdii guuleysatay loo sheegay inay koobka soo celiso – Gool FM
(Yurub) 06 Juunyo 2019. Sida wararku ay sheegayaan final-ka African Champions League ayaa dib loo ciyaari doonaan kaddib markii kooxdii ku guuleysatay lagu war-geliyey inay koobka dib u soo celiso.
Kooxda Esperance ayaa lagu amray inay dib u soo celiso koobka African Champions League, iyadoo loo sheegay in dib loo ciyaari doono kulankii lugta labaad ee Final-ka ahaa.
Naadiga reer Tunisia ee Esperance ayaa 1-0 uga adkaatay naadiga Wydad Casablanca kulankii lugta labaad ee final-ka tartankan kaasoo qabsoomay Sabtidii, balse kooxda koobka laga qaaday ayaa garoonka isaga baxday markii goolkii barbaraha ahaa oo ay dhaliyeen laga diiday.
Kooxda reer Morocco Wydad Casablanca waxa ay doonaysay in loo fiiriyo aaladda muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR si ay ugu ogaadaan in goolka ay dhaliyeen uu saxan yahay iyo inuu yahay mid qalad ahaa kasoo garoonka dhinac ka yaalay, balse waxaa loo sheegay inuusan shaqeynaynin VAR oo uu cilladeysan yahay.
Si kastaba ha ahaatee, xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika ee CAF magacooda loo soo gaabiyo ayaa shaaca ka qaaday in kulanka lugta labaad dib loogu ciyaari doono garoon dhex-dhexaad ah.
Yeelkeede, barbarihii labadan kooxood ay ku soo galeen Waddanka Morocco lugtii hore ee ku dhammaaday 1-1 ayaan la baabi’in oo halkeeda taalla, balse waxaa la ciyaari doonaa kulanka lugta labaad ee kala baxa ah.
Waxaa la sheegay in kulankan lugta labaad ee ku celiska ah la ciyaari doono kaddib marka uu dhammaado Koobka qarammada Afrika ee ku qabsoomi doona dalka Masar, kaasoo la soo gabagabayn doono 19-ka bisha July ee soo aaddan.
Bayaan ka soo baxay xiriirka CAF ayaa u dhignaa: “Waxyaabihii muhiimka u ahaa ciyaarta lama sameynin lugtii labaad, waa in ciyaartoyda Esperance ay soo celiyaan biladahoodii guusha iyo sidoo kale koobka African Champions League.”